SMART 2020 horaisin'ny Secrets Saint Martin Resort & Spa
Home » Vaovao momba ny indostria fihaonana » SMART 2020 horaisin'ny Secrets Saint Martin Resort & Spa
Hatao ao amin'ny Secrets Saint Martin Resort & Spa vaovao any Anse Marcel ny 19-21 Mey 2020 izao ny Saint Martin / Sint Maarten.
Izany dia nambara tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny 24 febroary avy amin'ny Secrets Saint Martin Resort & Spa miaraka amin'ireo mpiara-miasa SMART efatra - L 'Association des Hoteliers de Saint Martin, l' Office de Tourisme de Saint Martin, ny birao fizahan-tany Sint Maarten ary ny St. Maarten Fikambanana mandray vahiny sy mpivarotra (SHTA).
Faly ireo mpiara-miombon'antoka handray ny hetsika ao amin'ny Resort vaovao misy ny sisiny frantsay eo amoron'ny morontsiraka Anse Marcel. Ankoatry ny fampiantranoana ny tradeshow maharitra roa andro, Secrets no toerana hanokanana ny hetsika amin'ny 19 may. SMART dia hisy fanendrena orinasa, hetsika amin'ny tamba-jotra, atrikasa ary fitsangatsanganana. Toy ny tamin'ny taon-dasa, hetsika famaranana mahatalanjona dia hifarana amin'ny SMART 2020 amin'ny 21 Mey.
SMART no sehatra fivezivezena lehibe indrindra ary fivarotana malaza indrindra any avaratratsinanan'i Karaiba. Io no sehatra ho an'ireo mpandray anjara lehibe sy mpanapa-kevitra lehibe amin'ny indostrian'ny fizahan-tany any amin'ny faritra. Ny SMART tamin'ny taon-dasa dia nampiantrano solontena avy any Anguilla, Antigua, The Bahamas, Belzika, Bonaire, Kanada, Curacao, Dominica, Repoblika Dominikanina, France, Guadeloupe, Italia, Montserrat, Netherlands, Panama, Puerto-Rico, Saba, St. Barths, St Eustatius, St. Martin, St. Maarten, St. Kitts, Spain, United Kingdom ary Etazonia any Etazonia.
Famandrihana nomerika ho an'ny efitrano ao amin'ny Secrets dia azo atao ao www.Shta.com/smart. Manomboka anio ny fisoratana anarana ho an'ny vorona voalohany! Alefaso mailaka izahay amin'ny [email voaaro] na antsoy izahay amin'ny + 1-721-542-0108! Ny mombamomba ny hetsika dia havaozina tsy tapaka amin'ny www.shta.com/smart ary facebook.com/SMARTTradeshow.
INFORMATION SMART 2020
Mpividy sy mpamatsy vidiny manokana
Tsiambaratelo Saint Martin Resort & Spa CLICK ETO EFA BOKY IZAO
$ 229 mifototra amin'ny Double Occupancy All-Inclusive
Ny vidiny dia misy ny hetra amin'ny hotely sy ny sarany amin'ny serivisy.
Kaodin'ny vondrona dia Smart
LISA VOA-JAVATRA VOALOHANY
Mpividy - 150 $ Anisan'izany ny sarany:
Fidirana feno solontena 1
Karatra mari-pamantarana anarana
Fidirana amin'ny atrikasa rehetra
Fandraisana amin'ny asa sosialy rehetra
Lisitra ao amin'ny lahatahiry ofisialin'ny solontena
Mpamatsy - $ 399 (Mpikambana SHTA / AHSM) $499 (Tsy mpikambana) Ny sarany dia:
Solontena fidirana 1 feno (Solontena fanampiny manampy $ 175)
1 Tabletop sy signage
Lisitra ao amin'ny lahatahiry ofisialin'ny mpandray anjara & lahatahiry an-tserasera
Andiana fanendrena mandritra ny SMART
Mpivarotra - $ 399 (Mpikambana SHTA / AHSM) $499 Ny sarany (tsy mpikambana) dia misy:
Solontena Access 2 feno (Solontena fanampiny manampy $ 175)
Latabatra sy toerana ho an'ny mpivarotra amin'ny fampisehoana vokatra ao amin'ny lalantsara tradeshow
Fahazoana miditra amin'ny asa sosialy rehetra ho an'ny olona roa
RATE AIRFARE DISCOUNTED
RAHA MBOLA MANARITRA AVY AMIN'NY DESTINATION NY WINAIR PARTNER ianao, azafady mifandraisa:
telefaona +1 (721) 545-4237
ho an'ny famandrihana tapakila misy fihenam-bidy.
Miorina amin'ny fisian'ny seza izany ary ny mpandray anjara dia tsy maintsy mandefa scan / kopian'ny fisoratana anarana SMART nohamarinin'izy ireo
PROGRAMA ETO (Mariho azafady fa miovaova ny programa.)
Enga anie 19
10 AM-5 PM fisoratana anarana & fanokafana
Lanonana fandraisana 7 PM-10 PM
Enga anie 20
Atrikasa sy Masterclass
Sakafo hariva mifono mistery 7 PM-10 PM
Enga anie 21
Fitsidihana sy fitsidihana an-tranonkala
Hetsika famaranana 7 PM-10 PM
Momba an'i ST. MARTIN: Miaraka amin'ireo magazay tsy andoavam-bola, toeram-pisakafoanana isan-karazany, trano fananana ary fanatanjahantena anaty rano, St. Martin dia natao ho an'ireo mpiala sasatra miasa. Miaraka amin'ny fifangaroan'ny fitiavana mandray vahiny sy ny fomba eropeana, St. Martin dia iray amin'ireo toerana manintona an'i Karaiba. Manome fotoana ny mpitsidika hahita torapasika tsara tarehy, hankafy sakafo frantsay mahazatra sy Andrefana Andrefana ny mpitsidika, ary hijery zava-manintona maro. Raha te hahalala vaovao any St. Martin dia tsidiho azafady: https://www.st-martin.org/ Na hanaraka anay